आयकरको स्ल्याब हेरफेर, तपाईंलाई कति भार थपियो ? - BP Bichar
Home/समाचार/आयकरको स्ल्याब हेरफेर, तपाईंलाई कति भार थपियो ?
१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत आयकरमा व्यापक परिवर्तन ल्याएको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबार संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा आयकरको साविकको संरचनामा व्यापक परिवर्तन ल्याएको हो ।
जसअनुसार अब पाँच वटा स्ल्याब कायम गरेको छ ।
अब एकल व्यक्तिले तीन लाख पचास हजार रुपैयाँका आम्दानीमा एक प्रतिशत आय कर तिर्नु पर्नेछ । यो साविककै व्यवस्था हो ।
यसभन्दा माथि ३ लाख पचास हजारदेखि ४ लाख पचास हजारससम्म १० प्रतिशत कर लाग्छ । यसमा ३ लाखसम्मको आन्दानीमा भने एक प्रतिशत नै आयकर लाग्नेछ ।
यसअघि यही परिमाणको आयमा १५ प्रतिशत कर लाग्थ्यो । १० प्रतिशतको यो स्ल्याव नयाँ व्यवस्था हो ।
यसैगरी विवाहित व्यक्तिको हकमा पनि आयकरको साविकको व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएको छ ।
जसअनुसार विवाहित व्यक्तिको चार लाख रुपैयाँसम्मको आयमा एक प्रतिशत कर लाग्नेछ । यो साविककै व्यवस्था हो ।
त्यस्तै, चार लाखदेखि पाँच लाखसम्मको करयोग्य आयका हकमा १० प्रतिशतको नयाँ स्ल्याब थपिएको छ । जसअनुसार अब चार लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने दम्पत्तिले अघिल्लो चार लाखसम्ममा एक प्रतिशत र बाँकीमा १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ ।
हाल चार लाखदेखि पाँच लाखसम्म आय भएको दम्पत्तिका हकमा १५ प्रतिशतको स्ल्याब छ ।
पाँचदेखि सात लाखसम्ममा २० प्रतिशतको स्ल्याब कायम गरिएको छ । जसअनुसार पाँच लाखसम्मको आयमा १० प्रतिशत र त्यसभन्दा बढीमा २० प्रतिशतको आयकर लाग्नेछ ।
तर, २० लाखभन्दा बढी आयको हकमा थप २० प्रतिशत अतिरिक्त कर लाग्नेछ ।
हालसम्म पाँच लाखदेखि २५ लाखसम्मको आयमा २५ प्रतिशत र त्यसमाथि ४० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था थियो ।
तर एकलौटी र्फम दर्ता भएका करदाताको हकमा, निवृत्तिभरण बापतको आय र योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोषमा योगदान गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा अघिल्लो एक प्रतिशतको स्ल्याब नलाग्ने व्यवस्था छ । यो साविकमै भएको व्यवस्था हो ।
२०७५ जेठ १५ गते २०:५२ मा प्रकाशित
नेपाल विद्यार्थी संघ कास्कीद्धारा अनिश्चितकालिन शैशिक हडतालको घोषणा
नेपाली काँगे्रसले सूचना प्रविधि विधेयक विरुद्ध देशभर विरोधपत्र बुझाउने